Intshayelelo yombhali-Isiseko segama
Le ncwadi yayicelwa uBenoni B. Gattell ngexesha eliphakathi kwe1912 kunye ne1932. Ukususela ngoko kusebenze kwakhona kwakhona. Ngoku, kwi-1946, kukho ambalwa amaphepha angazange atshintshe kancane. Ukuze ugweme ukuphindaphinda nokuxakeka kwamaphepha aphelile, kwaye ndiye ndongeza amanqaku amaninzi, imihlathi kunye namaphepha.
Ngaphandle kwenkxaso, akungabazeki ukuba umsebenzi wawuya kubhalwa, kuba kwakunzima ukuba ndicinge kwaye ndabhale ngexesha elifanayo. Umzimba wam kufuneka uhlale ngethuba lo ndicinga ngolu hlobo ngolu hlobo kwaye ndakhetha amagama afanelekileyo ukwakha isakhiwo sefomu: kwaye ngoko, ndiyambulela ngokwenene umsebenzi awenzileyo. Ndimele kwakhona ndivume iiofisi zothando, abanqwenela ukungabi namagama, ngeziphakamiso zabo kunye noncedo lobuchwepheshe ekugqityeni umsebenzi.
Umsebenzi obunzima kakhulu kukufumana imigaqo yokubonisa umxholo okhutshwe ngawo. Umzamo wam onzima ukufumana amagama kunye namaqhosha aya kubonakalisa ngakumbi intsingiselo kunye neempawu ezithile zezinto ezingenakonakala, kunye nokubonisa ukungahambelani kwabo ngokungafaniyo kunye nemizimba yabantu. Emva kokutshintsha ngokuphindaphindiweyo ndagqitywa ngokwemigaqo esetyenziswa apha.
Izifundo ezininzi azenziwanga ngokucacileyo njengoko ndingathanda ukuba zibe nazo, kodwa utshintsho olwenziwe lufanele lwanele okanye lube lukhuni, kuba ekufundeni nganye ukutshintsha ezinye kubonakala kululeka.
Andizivumeli ukushumayela kunoma ubani; Andizibukeli njengomshumayeli okanye utitshala. Ngaba akunjalo ukuba ndinoxanduva lwencwadi, ndingathanda ukuba ubuntu bam bangabizwa ngokuba ngumlobi walo. Ubungakanani bezifundo endikunikezela ngolwazi, lukhulula kwaye lukhulule ekuzikhumbuleni kwaye luvimbele isikhalazo sokuthozama. Ndiyazama ukwenza amazwi angaqhelekanga kunye neentloni kumntu owaziyo nokungafi osemzimbeni wonke womntu; kwaye ndithatha ngokungathandekiyo ukuba umntu uya kuthatha isigqibo sokuba uya kuthini okanye akayi kwenza ntoni ngolwazi olunikeziweyo.
Abantu abanomdla baye bagxininisa isidingo sokuthetha apha kwamanye amava am kwiindawo zokuziqonda, kunye neemeko zobomi bam ezinokukunceda ukucacisa indlela endikwazi ngayo ukuba ndijwayelane kwaye ndibhale izinto ezinjalo ukungafani neenkolelo zamanje. Bathi oku kuyimfuneko kuba akukho ncwadana yebhayisili ehlanganisiwe kwaye akukho zikhokelo ezinikezelwa ukuxhasa iingxelo ezenziwe apha. Amanye am amava am angafani nantoni na endiyivileyo okanye ndiyifunde. Ukucinga kwam ngobomi bomntu kunye nehlabathi esiphila kuyo kuye kwandibonisa izifundo kunye neziganeko endingazifumananga ngazo kwiincwadi. Kodwa bekungekho ngqiqweni ukucinga ukuba le micimbi ingaba yinto, kodwa ingaziwa kwabanye. Kufuneka kubekho abo baziyo kodwa abanako ukuxelela. Andikho phantsi kwesibambiso sokufihla. Andiyikho inhlangano yantoni na. Andiyikholo ukuthetha oko ndifumene ngokucinga; ngokucinga ngokukhawuleza xa ephaphekile, kungekhona ebuthongweni okanye kwihambo. Andizange ndibe nanini ndifuna ukuhlala kwimeko yokuziphatha.
Into endiyazi ngayo ngelixa ndicinga ngezo zifundo njengendawo, iiyunithi zengxaki, umgaqo-siseko wenkalo, ingqiqo, ixesha, ubukhulu, ukudala nokudityaniswa kweengcamango, ndiya kuthemba, ndivule imimandla yezinto ezizayo kunye nokuxhaphazwa . Ngaloo ndlela ukuziphatha okufanelekileyo kufanele kube yinxalenye yobomi bomntu, kwaye kufuneka uhlale ungalingani nesayensi kunye nokuveliswa. Emva koko impucuko iyaqhubeka, kwaye ukuzimela kunye noxanduva kuya kuba ngumthetho wobomi bomntu kunye noRhulumente.
Nantsi umzobo wamanye amava ebomini bam beselula:
Isiqhelo sasingumntu wam wokuqala wokuxhamla neli hlabathi lezinto ezibonakalayo. Kamva ndaziva ngaphakathi emzimbeni, kwaye ndandiva amazwi. Ndayiqonda intsingiselo yezandi ezenziwe ngamazwi; Andizange ndibone nantoni na, kodwa mna, njengemvakalelo, ndingafumana intsingiselo yeliphi igama-izandi ezivezwe, ngesigqi; kwaye ukuvakalelwa kwam kwanika uhlobo kunye nombala wezinto ezichazwe ngamagama. Xa ndingawusebenzisa umboniso wokubona kwaye ndabona izinto, ndafumana iifom kunye nemibonakalo apho mna, njengento yokuziva, ndandiziva ngayo, ukuba ndibe nesivumelwano esivumelwaneni nento endandiyifumene nayo. Xa ndikwazi ukusebenzisa iimbono zokubona, ukuva, ukunambitha kunye nokuvumba kwaye ndibuze kwaye ndiphendule imibuzo, ndazifumanisa ukuba ndingumphambukeli kwilizwe elingaqhelekanga. Ndazi ukuba andinguye umzimba ondihlala kuwo, kodwa akukho mntu unokundixelela ukuba ngubani na okanye ndiphi na apho ndivela khona, kwaye abaninzi balabo ndibabuza babonakala bakholelwa ukuba beyizimba ababehlala kuzo.
Ndiye ndaqonda ukuba ndikumzimba endingakwazi ukuzikhulula kuwo. Ndilahlekile, ndedwa, kwaye ndikwimeko elusizi yokudakumba. Ukuphindaphinda okwenzekayo kunye namava andiqinisekisile ukuba izinto bezingeyiyo le nto babonakala beyiyo; ukuba kukho utshintsho oluqhubekayo; ukuba akukho sigxina sayo nantoni na; ukuba abantu bahlala bethetha ngokuchaseneyo noko bebethetha kona. Abantwana badlala imidlalo abayibiza ngokuba "kukukholelwa" okanye "masenze ngathi." Abantwana badlala, amadoda nabafazi baziqhelanisa nokuzenzisa; ngokwentelekiso bambalwa abantu ababenyanisile kwaye benyanisekile. Kwakukho inkunkuma kwimigudu yabantu, kwaye ukubonakala akuzange kuhlale. Imbonakalo ayenzelwanga ukuba ihlale. Ndizibuze: Ndizenza njani izinto eziza kuhlala zikhona, zenziwe ngaphandle kwenkunkuma kunye nokuphazamiseka? Elinye icandelo lam liphendule: Kuqala, yazi into oyifunayo; bona kwaye uzinze ngokuthe ngcembe kwifom apho uya kuba nayo le nto uyifunayo. Emva koko cinga kwaye uzokwenza kwaye uthethe loo nto ngokubonakalayo, kwaye ucinga ntoni kuya kuqokelelwa kwimozulu engabonakaliyo kwaye kulungiswe ngaphakathi nangaphaya kule fomu. Khange ndicinge ngala mazwi, kodwa la magama achaza into endandiyicinga emva koko. Ndaziva ndithembekile ukuba ndingayenza loo nto, kwaye kwangoko ndazama kwaye ndazama ixesha elide. Ndohlulekile. Ukusilela kwam ndaziva ndihlazekile, ndihlazekile, kwaye ndandineentloni.
Andizange ndikuncede ukuqwalasela iziganeko. Oko ndivile abantu bethetha ngezinto ezenzekile, ngokukodwa ngokufa, akuzange kubonakale kunengqiqo. Abazali bam babengamaKristu azinikeleyo. Ndakuva ifundeka kwaye yathi uThixo wenza umhlaba; ukuba wadala umphefumlo ongafi kumzimba ngamnye womntu kwihlabathi; kwaye umphefumlo ongazange uyamthobela uThixo wawuza kugxothwa esihogweni kwaye uya kutshisa ngomlilo nesulfure ngonaphakade naphakade. Andizange ndikholelwe ilizwi lento. Kwakubonakala kungenangqondo kum ukuba ndicinga okanye ndikholelwe ukuba nantoni na uThixo okanye abe nobenako ukwenza ihlabathi okanye ndidale kumzimba apho ndahlala khona. Ndatshise umnwe wam ngomdlalo wesulfure, kwaye ndikholelwa ukuba umzimba ungatshiswa ukufa; kodwa ndazi ukuba mna, into endiyiqonda njengam, ayikwazi ukutshiswa kwaye ayiyi kufa, loo mlilo nesulfure andinakubulala, nangona intlungu ebushushu yayiyikrakra. Ndingaziva ingozi, kodwa andiyiki.
Abantu babengazi ukuba 'kutheni' okanye 'yintoni', malunga nokuphila okanye ngokufa. Ndazi ukuba kufuneka kubekho isizathu sezinto ezenzeke. Ndandifuna ukwazi iimfihlelo zobomi kunye nokufa, nokuphila ngonaphakade. Andikwazi ukuba kutheni, kodwa andinakukunceda ukufuna oko. Ndazi ukuba kwakungekho ubusuku nemini kunye nobomi nokufa, kwaye akukho hlabathi, ngaphandle kokuba kukho izilumko ezazilawula umhlaba kunye nobusuku nemini kunye nobomi nokufa. Nangona kunjalo, ndazimisela ukuba injongo yam yayiza kubakho abo bulumko abaya kundixelela indlela endifanele ndifunde ngayo noko ndimele ndiyenze, ukuphathiswa iimfihlo zobomi nokufa. Andiyi kucinga ukuthetha oku, isisombululo sam esiqinile, kuba abantu abayi kuqonda; Bendiya kukholelwa ukuba ndiyindoda okanye ndingaziqhatha. Ndandineminyaka engama-7 ubudala ngeli xesha.
Kwiminyaka elishumi elinesihlanu okanye ngaphezulu ngaphezulu. Ndabona indlela eyahlukileyo ngayo ebomini bamakhwenkwe namantombazana, ngelixa bekhulile baza batshintsha baba ngamadoda nabasetyhini, ngokukodwa xa beselula, kwaye ngokukodwa kwimiba yam. Iimbono zam zatshintshile, kodwa injongo yam - ukufumana abo babezilumko, ababaziyo, kunye nabangakwazi ukufunda iimfihlelo zobomi nokufa-akuzange kutshintshwe. Ndandiqiniseka ngokuhlala kwabo; ihlabathi alikwazanga ukuba, ngaphandle kwabo. Ukulungiswa kweziganeko ndiyabona ukuba kufuneka kubekho urhulumente kunye nokulawulwa kwehlabathi, njengoko kufuneka kubekho urhulumente welizwe okanye ulawulo lwaliphi na ishishini ukuba ziqhubeke. Ngenye imini umama wandibuza into endiyikholelwayo. Ngaphandle kokungabaza ndathi: Ndiyazi ngokuqinisekileyo ukuba ubulungisa bulawula ihlabathi, nangona ubomi bam bubonakala bububungqina bokuba akunjalo, kuba ndingaboni ukuba ndikwazi ukufeza into endiyazi ngayo, kwaye into endiyithandayo.
Ngaloo nyaka, entwasahlobo ye-1892, ndafunda kwiphepha leCawa ukuba uMadam Blavatsky othile wayeyindoda yezilumko zaseMpuma ezabizwa ngokuba yiMahatmas; ukuba ngokuphila ngokuphindaphindiweyo emhlabeni, bebenokuhlakanipha; ukuba babephethe iimfihlelo zobomi nokufa, kwaye bebangela ukuba uMadam Blavatsky abe ngumbutho we-Theosophical, apho iimfundiso zabo zinganikwa khona uluntu. Kuza kubekho intetho ngalobo busuku. Ndiye e. Kamva ndaba ilungu elinamandla loMbutho. Ingxelo yokuba kwakukho amadoda alumkileyo - ngamaphi na amagama abizwayo-awazange amangalise; oko kwakubungqina bokuba yinto endiyifumene ngayo ngokuqinisekileyo ukuba iyimfuneko ekuqhubekeni komntu kunye nokukhokelwa kunye nokukhokelwa kwendalo. Ndafunda konke endikwaziyo ngabo. Ndacinga ukuba ngumfundi wesinye isilumko; kodwa ukuqhubeka nokucinga kwandikhokelela ukuba ndiqonde ukuba indlela eyinyani ayizange ibe nayiphi na isicelo esisemthethweni kunoma ubani, kodwa ukuba ndilungele kwaye ndikulungele. Andizange ndibonwe okanye ndive, kwaye ndingazange ndidibana nabo, 'abazizilumko' njengokuba ndikhulelwe. Andizange ndibe nomfundisi. Ngoku ndiyayiqonda kakuhle imiba enjalo. Eyona yinyani 'Izilumko' ziThathu zeSelune, kwiNdawo yokuPhelela. Ndayeka uxhulumaniso kunye nonke uluntu.
Ukususela ngoNovemba ka-1892 Ndadlulela kumava amangalisayo kunye namava okubalulekileyo, emva koko, entwasahlobo ye-1893, kukho kwenzeka umcimbi obalaseleyo wobomi bam. Ndadlule i-14th Street kwi-4th Avenue, kwisixeko saseNew York. Iimoto nabantu babekhawuleza. Ngethuba lo kunyuka ukuya kwinqanaba lekhoneni laseNyakatho-mpahla, ukuKhanya, kunkulu kuneemitha eziliwaka ezivulekileyo phakathi kwentloko yam. Ngelo thuba okanye kwinqanaba, ixesha elide lafunyanwa. Kwakungekho xesha. Umgama kunye nobukhulu abukho ubungqina. Ubume bwakhiwa ngamacandelo. Ndayazi iiyunithi zendalo kunye neeyunithi njengezixhobo ze-Intelligences. Ngaphakathi nangaphezulu, ngoko kukuthi, kwakukho iMibane emininzi nangaphezulu; Ukugqithisa okukhulu kwiMiqondiso emininzi, eyabonisa iintlobo ezahlukeneyo zeeyunithi. Iintambo zazingekho zendalo; Beyizibane njenge-Intelligences, Light Lights. Xa kuthelekiswa nokukhazimula okanye ukukhanya kwalezo zibane, ukukhanya kwelanga kwakunobunzima obunzima. Kwaye nakuzo zonke izibane kunye neeyunithi kunye nezinto ndazi ukuba uBukhona beNkathazo. Ndayazi ukuba nguNgcengo njengoMntu oPhezulu kwaye ongenasiphelo, kwaye uqaphele ulwalamano lwezinto. Andizange ndibe neentloni, iimvakalelo, okanye ukuzonwabisa. Amagama ayaphumeleli ngokupheleleyo ukuchaza okanye ukuchaza UKUBA NOKUBHALISA. Kuya kuba ngongenangqondo ukuzama ukuchaza inkcazo ye-sublime ubukhulu kunye namandla kunye nolawulo kunye nolwalamano kwi-poise yento endiyazi ngayo. Kwezihlandlo ezimbini kwixesha elilishumi elinesibini elizayo, ixesha elide kweso sihlandlo ngasinye, ndayazi i-Consciousness. Kodwa ngelo xesha ndingazi ukuba ndingazange ndiyiqonde ngaloo mzuzu yokuqala.
Ukuqaphela Ukunyamekela kukusetyenzana lamagama adibeneyo ndiwunyulile njengengqamana ukuthetha ngethuba elona xesha linamandla kwaye liphawulekayo lobomi bam.
Ubulumko bukhoyo kuyo yonke iyunithi. Ngako oko ubukho boBugcisa benza yonke into iyayiqonda njengoko umsebenzi usebenza kwinqanaba elithile.
Ukuqaphela uNgqiqo kubonisa ukuba 'engaziwayo' kumntu oye waqonda. Emva koko kuya kuba ngumsebenzi waloo mntu ukuba azise into enokukwazi ngayo ukuqonda.
Okubaluleke kakhulu ekuqaphelisweni koNcedo kukuba oko kwenza ukuba umntu azi malunga nayiphi na isifundo, ngokucinga. Ukucinga kukubambelela ngokukhawuleza koKhanya koNgcono ngaphakathi kwimiba yokucinga. Ngcaciso emfutshane, ukucinga kukuzigaba ezine: ukhetha isihloko; ubambe ukuKhanya koMsoko kulo mbandela; kugxininisa ukuKhanya; kwaye, ukujoliswa koKhanya. Xa ukuKhanya kugxininisekile, le ndaba iyaziwa. Ngale ndlela, ukuCinga kunye nokuPhumela kubhaliwe.
Injongo ekhethekileyo yale ncwadi yile: Ukuxelela iingqondo zomzimba ukuba singabantu abangabonakaliyo kwiindawo ezintathu zokungafi ngokungafi, uThathu uSelves, owathi, ngaphakathi naphaya kwexesha, wayehlala kunye neengcinga zethu ezinkulu kunye nabafundi kwiimpawu ezingafaniyo zesini kwiNdawo yokuPhelela; ukuba thina, owaziyo ngoku kwimimandla yabantu, siphumelele ekuvavanyeni okubalulekileyo, kwaye ngoko ke sathunjwa kuloo Mbuso woBugxininiso ukuya kule ndoda kunye nehlabathi lokuzalwa nokufa nokuhlala kwakhona; ukuba asinakukhumbula le nto kuba sizibeka ebuthongweni bokuzimela, ukuphupha; ukuba siya kuqhubeka nokuphupha ebomini, ngokufa size sibuyele ebomini; ukuba sifanele siqhubeke senza oku kude sidibanise, sivuke, sisuke kwi-hypnosis esizibeka yona; ukuba, nangona kunjalo ixesha elide lithatha, simele siphapheke kwiphupha lethu, siziqonde njengethu ngokwemizimba yethu, size sivuselele kwaye sibuyisele imizimba yethu ebomini obungunaphakade ekhaya lethu - Indawo yokuhlala esihlala kuyo - iyingqungquthela le hlabathi lethu, kodwa ayibonakali ngamehlo okufa. Emva koko siya kuqwalasela indawo zethu kwaye siqhubeke neenxalenye zethu kuMyalelo weNaphakade woPhuculo. Indlela yokufeza oku kuboniswa kwizahluko ezilandelayo.
Kulo kubhala umbhalo wesandla walo msebenzi unomshicileli. Kukho ixesha elincinci lokungeza kwizinto ezibhaliweyo. Kwiminyaka emininzi yokulungiswa kwayo kuye kwacelwa ukuba ndibandakanye kwisicatshulwa ezinye iinguqulelo zeBhayibhile ezibonakala zingenakuqondakala, kodwa oko, ngokubhekiselele kwinto ekhankanywe kula maphepha, kunengqondo kwaye inentsingiselo, kwaye , ngelo xesha, ukhuthaze iingxelo ezenziwe kulo msebenzi. Kodwa ndandicinga ukuba ndiqhathanise okanye ndibonise iibhalelwano. Ndandifuna ukuba lo msebenzi ugwetyelwe ngokwawo kuphela.
Kunyaka ophelileyo ndathenga umqulu oqukethe ezilahlekileyo Iincwadi zeBhayibhile kunye neeNcwadi eziLityelweyo zase-Eden. Xa uskena amaphepha ezi ncwadi, kuyamangalisa ukubona ukuba zingaphi iindinyana ezingaqhelekanga nezingenakuqondakala ezinokuqondwa xa umntu eqonda okubhalwe apha malunga ne-Triune Self kunye namacandelo ayo amathathu; malunga nokuzalwa ngokutsha komzimba womntu ube ngumzimba ofezekileyo, ongafiyo, kunye noMmandla osisigxina, othi ngamazwi ka Yesu "bubukumkani bukaThixo."
Kwakhona izicelo zenzelwe ukucaciswa kweendinyana zeBhayibhile. Mhlawumbi kulungile ukuba oku kwenziwa kunye nokuba ngabafundi beConfection and Destin banike ubungqina bokuba baqinisekisile iingxelo ezithile kule ncwadi, obungqina obunokufumaneka kwiTestamente Entsha nakwiincwadi ezikhankanywe ngasentla. Ngoko ke ndiya kwengeza isahluko sesihlanu kwiSahluko X, oothixo kunye neenkolo zabo, ezijongene nale micimbi.
ENew York, ngoMashi 1946
Qhubela kwiNtshayelelo ➔